Paris Saint-Germain oo qorsheeneysa inay u dhaqaaqdo saxiixa bar-tilmaameedka tababare Zidane – Gool FM
(Paris) 21 Maajo 2019. Paris Saint-Germain ayaa qorsheyneysa inay dharbaaxa xoogan la gaarto tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Shabakada “Le 10 Sport” ee dalka Faransiiska ayaa sheegtay in kooxda PSG ay isku dayi doonto lasoo saxiixashada xidiga kooxda Manchester United ee Paul Pogba, kaddib marka uu furmo suuqa xagaaga.
Pogba ayaa ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan uu tababare Zinedine Zidane bar-tilmaameedka ka dhiganayo, wuxuuna macalinka reer France xiiseenayaa inuu helo adeega xiddiga ay isku wadanka yihiin, si uu sameeyo khad dhexe ee aad u xoogan.
Shabakada “Le 10 Sport” ayaa sidoo kale sheegay inaan wali la go’aaminin heshiiska Paul Pogba uu ugu biirayo kooxda Real Madrid, taasoo ku dhiirigalineysa Paris Saint-Germain inay u dhaqaaqdo soo xero galinta laacibka reer France.
Dhanka kale, wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa sheegay in maamulka kooxda Manchester United aysan dooneynin inuu ka tago Pogba, halka tababare Ole Gunnar Solskjær uu doonayo in si weyn uu ugu tiirsanaado adeega Paul Pogba xiliyada soo aadan oo dhan.